किन अचानक बन्द गरियो भायनेटको 'बडा दशैंमा बडा टिभी अफर' ? यस्तो छ भित्री कारण - Technology Khabar
» किन अचानक बन्द गरियो भायनेटको ‘बडा दशैंमा बडा टिभी अफर’ ? यस्तो छ भित्री कारण
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायनेट कम्युनिकेशन्सले केहि समयअघि आफ्ना ग्राहकहरु र संभावित ग्राहकहरुका लागि इन्टरनेट सेवामा अफर सार्वजनिक गर्यो ।
तर सो अफर केहि दिन चलेर हाल भने बन्द भएको छ।
सो अफर बन्द भएको न ग्राहकहरुले नै थाहा पाएका छन न त कम्पनीले जिम्मेबार भएर नै ग्राहकहरुलाई अफर बन्द भएको जानकारी दिएको छ ।
नेपालीहरुसँग दशैंको अवसरमा अतिरिक्त खर्च गर्ने रकम हुनेहुँदा अधिकांश कम्पनीहरुले विभिन्न छुट र डिस्काउन्टका साथै नयाँ अफरहरु लिएर आउने गर्दछन् । यसैअनुसार पनि भायनेटले सो अफर सार्वजनिक गरेको थियो । तर कम्पनीले अफर सार्वजनिक गरेको केहि दिनभित्रै अचानक बन्द गरेको हो ।
यस्तो थियो अफर-
निकै भव्य र तामझामसहित सार्वजनिक गरिएको अफर रोकिएको वा बन्द भएको कम्पनीले अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा जानकारी दिएको छैन् । तर ग्राहकहरुले अझैपनि सो बारेमा भने जानकारी माग गरिरहेका छन् ।
भायनेटले इन्टरनेट सेवाका साथमा टेलिभिजन सेट उपलब्ध गराउने गरी निकै आक्रामक अफर बजारमा ल्याएको थियो जसलाई कम्पनीले समेत महत्वपूर्ण रुपमा लिएर प्रबद्र्धन गरिरहेको थियो ।
तर इन्टरनेट सेवा शुल्कमा पछिल्लो दिनमा घुमाउरो पारामा सिण्डिकेट लागू हुँदा नेपाली ग्राहकहरुले भने सो अफरको फाईदा लिन सकेनन् ।
भायनेटले ल्याएको सो अफरको रोक्न कम्पनीकै प्रबन्ध निर्देशक बिनय बोहरा पूर्व अध्यक्ष रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल(आइस्पान)ले चर्को बिरोध र दबाब दिएको खुलासा भएको छ।
जसमा आइस्पानका अन्य कम्पनीहरुले समेत सो अफर बन्द गर्न दबाब दिएका थिए भने सो अफरले आइस्पानले भनेअनुसारको ‘न्यूनतम मूल्य’ भन्दा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिएको आरोप लगाईएको थियो।
आइस्पानले सो बारेमा लिखित तथा औपचारिक रुपमा दबाब नदिएपनि त्यसलाई अनौपचारिकरुपमा बन्द गराएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
‘भायनेटको अफरको बारेमा आइस्पानको प्लेटफर्ममा तिब्र विरोध भएपछि त्यहिँबाट सो अफर बन्द गराउन दबाब दिईएको थियो,’ स्रोतले दाबी गर्यो ।
स्रोतकाअनुसार सो बारेमा अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले यसअघि अनौपचारिकरुपमा लागू गरिरहेको इन्टरनेट सेवाको न्यूनतम शुल्कको दायरा उलंघन गरेको आरोप भायनेटलाई लगाएका थिए ।
‘यसअघि अन्य कम्पनीहरुले त्यस्ता किसिमका अफर ल्याउँदा बिरोध गर्ने गरेका भायनेटका प्रबन्ध निर्देशक आफैं ‘ट्र्याप’ मा परेपछि सो अफर रोकिएको हो,’ स्रोतले स्पष्ट पार्यो ।
यसअघि देशभर गरिएको पहिलो लकडाउनपछि आइस्पान अन्तरगत रहेका कम्पनीहरुले ग्राहकहरुलाई इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्दा रु १ हजार भन्दा कम मूल्यमा इन्टरनेट सेवा बिक्री नगर्ने र बरु निश्चित न्यूनतम ब्याण्डविथ तोक्ने अनौपचारिक सहमति गरेका थिए ।
त्यसैगरि कम्पनीहरुको दाबीअनुसार ‘घाटा खाएर’ बिक्री गर्दै आएको राउटरको निश्चित मूल्य ग्राहकहरुसँग असुल गर्ने सहमति गरेका थिए ।
यसलाई तत्कालिन समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका एक लगानीकर्ताले सबै इन्टरनेट सेवा कम्पनीहरु बचाउने र सेवा सुचारु गर्ने अन्तिम अस्त्र भएको दाबी गरेका थिए ।
‘हामीले लागत भन्दा सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा बेच्नबाट रोक्नुपर्छ भनेका हौं, घाटाको बिजनेस कति दिनसम्म गर्ने ?,’ ती लगानीकर्ताले तत्कालिन समयमा भनेका थिए ।
आइस्पानले यसअघि पनि दबाब दिएर नै नयाँ वर्षको अवसरमा गएको वैशाखमा वर्ल्डलिंकले निकालेको भारी छुटसहितको अफर बन्द गराएको थियो । र त्यसबेला आइस्पानका अध्यक्षले नै एकातिर सरकारसँग सहुलियत माग गरिएको र अर्कोतर्फ इन्टरनेट सेवामा छुट अफर ल्याएको भन्दै विरोध गरेर सो अफर बन्द गराएका थिए जसले गर्दा कम्पनीले तत्काल सो अफर बारेका जानकारी नै वेबसाइटबाट हटाएको थियो ।
त्यसबेला पनि सस्तो शुल्कमा ग्राहकहरुलाई इन्टरनेट सेवा लिनबाट बन्चित गरिएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो । जसमा आइस्पानका सदस्यहरुले सो अफर रोक्न चर्को दबाब दिएको एक कम्पनीका संचालकले बताएका थिए ।
अहिले फेरी सोहि अवस्था र घट्ना दोहोरिएको छ तर कम्पनी र समय भने फेरिएको छ।
आइस्पानको सिण्डिकेट भने अझ ससक्त रुपमा बढ्ने देखिएको एक लगानीकर्ताले बताए ।
अब यस बारेमा भायनेटले ग्राहकहरुलाई के स्पष्टिकरण दिनेछ र आइस्पानको सिण्डिकेट रोक्न नियमनकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहितका सरकारी निकायहरुले के गर्लान ? भन्ने चासोको विषय रहेको छ।
पठाओलाई समर्थन गरेकोमा यात्रुलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिँदै